Ukunqunywa kwezinwele zakho okuphelele kusignali yezinkanyezi
Izinwele - enye yezingxenye eziyinhloko zamandla nemilingo yobuhle besifazane. Banikezwa amandla akhethekile, okungaqiniswa ngosizo lwezinwele ezifanele noma ukuloba. Ngakho-ke, lapho ukhetha i-hairstyle, umuntu akufanele aqondiswe nje ngemifashini yemfashini, uhlobo lwezinwele nobunjwa bomzimba, kodwa futhi nge-horoscope ekhethekile yezinwele zezinwele ezihlanganiswa ngabaqondisi bezinkanyezi kuzo zonke izibonakaliso ze-Zodiac.
Abamele lesi sibonakaliso basuke bengacindezeli, abantu abaqinisayo nabangenabugovu, ngokucacile baya emgomweni wabo, baqede zonke izithiyo endleleni. Izinwele zabo ziziphatha ngendlela efanayo ne-hostess, ngakho-ke zingashukunyiswa izinwele ezincane ezenziwe nge-styles, ezilula kumidwebo, noma ngekhanda elenziwa izinwele ezindala i-la "ponytail". Kodwa ungakhohlwa ukuthi ama-Aries - abesifazane bahlambalaza futhi bahamba ngezinyathelo ngefashoni, ngakho-ke izinwele zabo zibhekwa ngemininingwane engalingani, izintambo ezimibalabala kanye namazwi agqamile. Usuku oluhle kakhulu lokuvakashela abalungisi bezinwele ngoLwesibili.
Abesifazane balesi sibonakaliso sasemhlabeni bathanda ukuzinza nokuqina, bemi ngokuqinile ezinyaweni zabo futhi baxabise izimpahla ezibonakalayo. Ngakho-ke, izinwele zabo kufanele zihlukaniswe ngokubunjwa okuqinisekisiwe, shades yemvelo kanye nesimo esihle sezinwele. Zifaneleka kakhulu ukusikwa kwezinwele zobude obuhlukahlukene, bobabili abaphothuliwe nge-nape evulekile, futhi abadala bezinhlanzi. Abanikazi bezinwele ezinde banganconywa ukuba baguqule izinwele ngendlela ehle, i-curls ngokukhululekile. Usuku olungcono kakhulu lokuya kumculi wezinwele nguLwesihlanu.
Abamele lesi sibonakaliso babonakala ngokushintsha, ukuhamba, uthando lokukhululeka nokuhamba. Ngakho-ke, izindlu zabo zezinwele kufanele zikhululeke, zingadingeki ukubeka okunzima futhi ziguqulwe kalula. Izinwele ezinzima, ukunqunywa kwezinwele kukhanda, futhi izinwele eziqondile nezingavamile zinganikwa ivolumu eyengeziwe nge-perm. Kulezi zimo, izinwele zingabanjwa kalula, zikhuliswe ngekhanda eliphezulu, zibekwe ngamathuluzi akhethekile. Usuku oluhle lokuvakashela abalungisi bezinwele ngoLwesithathu.
Laba besifazane, ngenxa yazo yonke into ebonakalayo ehlukumezekayo nokuthandana, banomlingiswa wensimbi kanye nokuqonda okuphelele kwebhizinisi. Ngakho-ke, izindlu zabo zezinwele kufanele zibe zombili eziqinile futhi zesifazane. Ilungele isikwele, i-classic noma i-asymmetrical, ihlotshiswe nge-barrette enhle noma i-hoop ephathekayo. Ungasikhuthazi ama-bangs, izinwele ezinde zingabanjiswa futhi ziqoqwe "emsila" ophezulu. NgoMsombuluko usuku olufanele kakhulu lokuya kubanini bezinwele.
Abamele lesi sibonakaliso yizinwele zezinwele ezinconywayo ezifana nomfana wengonyama. Zizoheha abanye futhi zengeze ubungqabavu. Ivolumu eyengeziwe kanye nezinwele ze-fluffiness kuzonikeza izinwele zokubamba, ukukhanda ama-curlers amakhulu, ama-nach kanye nezinwele. Ukuze wakhe izinwele zezinwele ezinjalo, izindlela ezikhethekile ziyadingeka ukuze udwebe ngendlela yama-gel, ama-lacquers nama-mousses wevolumu angenasisindo noma ahlanganise izinwele. Kungcono ukuya kumculi wezinwele ngeSonto.
Laba besifazane nabasebenzi abasebenzayo bazobhekana nezitayela ezilula nezigatshana ezicacile ngaphandle kwemininingwane eyinkimbinkimbi. Ukuze kugcizelele ubufazi nobuntu bomnikazi bazo kuzosiza ama-accents ombala, ukubukeka kahle nokukhanya okunethezeka. Izinwele ezinde zingabhekwa kahle futhi zifakwe esikhwameni esincane esihle, ukuhlobisa ikhanda ngekhanda elihle kakhulu lezinwele. ULwesithathu yilusuku olufanele kakhulu lokuvakashela inkosi.
Abamele lesi sibonakaliso baqaphe ngokucophelela ukubukeka kwabo futhi bangavumeli ukuthungatha nokungahloniphi emfanekisweni wabo. Ngezinwele zezinwele bathanda ama-classic, kodwa avulekile ukuhlolwa. Ngakho-ke, i-Libra kufanele ivuselele ukulula kwe-haircut ngekhambi elingavamile lombala (u-ombre, melirovanie, umbala nomphumela wokushisa kwelanga oshiswe elangeni nokunye okunjalo). I-salon yobuhle kungcono ukushiya ngoLwesihlanu.
Esinye sezibonakaliso ezincane kakhulu ze-zodiac, ngakho-ke abesifazane - ama-Scorpion ngaso sonke isikhathi azama ukunakwa. Zizosondeza isitayela sezinwele ezibushelelezi ngesitayela se "vamp", ama-locks angama-curvy egeleza phezu kwamahlombe nangemuva, kanye nama-braids, ahlaselwe phansi ekhanda. Imibala egcwele imibala izosiza ekuthuthukiseni ukukhanga kwemilingo ye-Scorpions. Izitayela zezinwele ezenziwe ngoLwesibili, zizophumelela kakhulu.
Abamele lesi sibonakaliso banenkululeko enkulu futhi banenkululeko yentando yeningi futhi abafuni "ukukhathazeka" nge-styling eyinkimbinkimbi. Izinwele zabo kufanele zibe lula futhi zisebenziseke, i-Sagittarius izwa kahle futhi iboshwe, futhi iqoqwe "ponytail" noma i-bun. Into ebaluleke kunazo zonke yilezi zinwele ezinempilo, zemvelo kanye nokuncintwa ngokucophelela, amathiphu ahlelwe kahle. Usuku olungcono kakhulu lokuya kumculi wezinwele ngoLwesine.
Izinkanyezi zeluleka abesifazane - amaCricricorns ukugqoka i-bang. Ubude bezinwele abukhathazi ngempela, into eyinhloko ukuthi bangakwazi ukubeka kalula futhi ngokushesha. Ukuze wenze lokhu ungasebenzisa zonke izinhlobo zezinwele zevidyo, izigaxa ngisho nezikhwama. Abameleli abasebenzisa lesi sibonakaliso ngokuvamile bakhetha izinhlobo zama-classical nemibala yemvelo. Usuku oluhle kunazo zonke lokuya saloni nguMgqibelo.
Ngakho-ke isibonakaliso sokuqala nesingavumelani nesimo se-Zodiac, ngakho-ke, abesifazane base-Aquarius bavezwe ngobuciko nokuqhathanisa kokubili kwezinwele kanye nokubukeka ngokujwayelekile. Zingaphambi kwesikhathi futhi zilindele izitayela zefashini kusengaphambili, ngakho zizovela ngokuhlukahluka kwangempela kokubili izinwele ezinde nezinwele ze-ultra-short, ezongezwe yizimpawu ezigqamile zombala nemininingwane engavamile. Kuzo, azikho imithetho eqinile nemigodi, futhi usuku oluhle lokuvakashela abalungisi bezinwele nguMgqibelo.
Isibonakaliso esithandana kakhulu, esivinjelwe futhi esivumelanisiwe se-Zodiac. Abesifazane - Amapulisi azohambisana nazo zonke izinhlobo zezinsimbi, izinwele kanye nezinwele zezinwele eziyinkimbinkimbi ngesitayela sama-60s anama-napes aphakeme kanye nama-curls agelezayo. Ngezinwele ezimfushane zibukeka njenge-Bob-kar enhle kakhulu. Imibala yama-pisces, njengomthetho, khetha inhlobo yemvelo nokuthula - i-blond yegolide, uju, nut kanye ne-chestnut. Usuku oluhle lokuya kumuntu wezinwele ngoLwesine.
Kungcono nini ukuthola izinwele ngoNovemba 2015?
Yini ongayilinda kusukela ngosuku 12.12.12?
I-Horoscope yenkomo ngonyaka we-tiger
I-sauce ye-Shrimp: 6 zokupheka kuzo zonke izikhathi
I-Ricotta ne-tomato ikhekhe
Sipheka i-dessert enhle kakhulu: i-pudding
Amanzi okugeza ngezinyawo - ukunakekelwa kwezinyawo
Izinqubo zokunakekelwa kwezinwele
Ingelosi yendwangu ngezandla zakhe
Kuthiwani uma unokuvuvukala kobuso bakho?
Ukugeza kweRashiya: inzuzo nokulimala
Ukusetshenziswa kwamakhowe, izindawo zokwelapha
Izimfihlo Zonyaka Omusha: umuthi kaKhisimusi wezinkinobho ngezandla zakho
Amathiphu Aphezulu Ayisithupha Wezempilo Yenhliziyo
Izimbangela zengqondo zesisindo esiningi